I-Masuria ngaseLake 4 - I-Airbnb
I-Masuria ngaseLake 4
Wyszowate, Warmińsko-Mazurskie, Poland
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDanuta
Konke malunga nendalo! Le ndlu intle yamaplanga ibekwe kwisiqwenga esincinci sentlango yechibi. Izolile, izolile ikwi-3km ukusuka kwindlela enkulu engu-63 kwaye izikhephe ezinemoto azivumelekanga echibini. Uya kujikelezwa yimithi eqolileyo kunye neentlobo ngeentlobo zeentaka kunye nezilwanyana. Kukho unxweme lwabucala, olunentlabathi enedokhi yalo enkulu eyi-T. Ilungele ukuqubha, ukuloba, kunye nokuphumla. Indlu yangasese, icocekile kwaye ikhululekile. Iphelele kubantu abathanda indalo kwaye bafuna ukuphumla!
Le yindlu encinci eyenziwe ngamaplanga enendawo yokuziphakela. Ipropathi inocingo oluyi-1.5 yeehektare ezinkulu, inomnyango wabucala kunye nokhethekileyo kwi-pier enkulu kunye nechibi. I-Cottage ibandakanya igumbi lokulala elineebhedi ezimbini, igumbi lokuhlala elineebhedi ezimbini zesofa, igumbi lokuhlambela elinesinki kunye neshaver, ikhitshi elinefriji, isitovu sombane kunye nazo zonke izinto ezisisiseko eziyimfuneko ekuphekeni. Kwipatio une-grill yokuphumla ngokuhlwa kwaye elunxwemeni lwechibi kukho i-gazebo enezibane, i-grill, itafile eneebhentshi kunye nomgodi womlilo wokucula ingoma ngokuhlwa. Kwipropati sinamanzi kunye nezixhobo zemidlalo zendlela ezirentwayo / iikayak, isikhephe esikrwada, iibhayisekile zasentabeni nezedolophu/.
Ipropathi yi-1.5 ha, ibiyelwe kwaye akukho bamelwane kufutshane. Imalunga ne-3.5 km ukusuka kwindlela enkulu engu-63. Kukho indawo yokungena yabucala kwipropathi kunye nesanti yokungena encinci echibini. Kukho imithi emininzi ekhule kakhulu kunye namatyholo, amahlathi kunye namasimi akude kwindlela exakekileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Danuta
Ndinguye okanye omnye umntu uyafumaneka ngalo lonke ixesha nasebusuku. Ndifumaneka ngomnxeba okanye undwendwe lungeza emnyango xa kukho unxunguphalo okanye nawuphi na omnye umcimbi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wyszowate